Covid-19 ကာ ကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက် ဆုံးတွေ့ရှိချက် များ – Zartiman
Covid-19 ကာ ကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက် ဆုံးတွေ့ရှိချက် များ
ကိုဗစ်-၁၉ကာကွယ်ဆေး ရှာရတာ ကိုရီးယားကား အခန်းဆက်ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ဟိုဟာတွေ့လိုက် ဒီဟာတွေ့လိုက်နဲ့။ လိုရင်းကို မ ရောက်နိုင်ဘူး။” “မလွယ်ဘူးဖိုးခင်” “မျောက်ကလိုသလောက်မရဘူးကွ။ ဒီမှာ ရစ်ချတ်… မင်းလာအစမ်းခံမလား။” “စမ်းသပ်တာက လွယ် တယ်မှတ်လို့ ပိုးတွေအပြင်မပြန့်သွားအောင် ထိန်းသိမ်းရတာ နေရာအခက်အခဲနဲ့ အခြားကန့်သတ်ချက်တွေ ဘာညာရှိသေးတယ်။” “ဒါလဲ ဟုတ်တာပဲနော်။” “ကိုယ့်ဟာကိုယ်သူများတွေ့ရှိချက်တွေကို အေးဆေးထိုင်ရေးနေစမ်းပါကွာ။ လျှာမရှည်နဲ့။ ဒီမှာက အသက်နဲ့ရင်းလုပ် နေရတာ။ တိရိစ္ဆာန်ချစ်သူများအဖွဲ့က အော်မှာလည်း စိုးရိမ်ရသေးတယ်။
နောက်နောင်လျှာရှည်တဲ့ကောင်တွေရယ်။ သတင်းရေးတာကို ဟိုဟာဖြစ်တယ် ဒီဟာဖြစ်တယ် ဝေဖန်တဲ့ကောင်တွေရယ် လက်တွေ့လာ အစမ်းခံ။Covid-19 #ရော ဂါကာကွယ်ဆေးဟာအလုပ်ဖြစ်နိုင်ပြီး ရောဂါကူးစက်ဖူးသူဟာရောဂါပြန်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်မရှိဘူး လို့ မျောက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ရာမှာတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ 🇺🇸 အမေရိကန်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေက Covid-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီး မျောက်တွေကိုစမ်းသပ်တွေ့ရှိထားတဲ့ သ တင်း နှစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ နံပါတ်(၁) မျောက်9ကောင်ကို Covid-19 ဖြစ်စေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ရောဂါကူးစက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။
သူတို့ကို ရောဂါဖြစ်နေရာကနေ ပြန်နေကောင်းလာအောင်စောင့်တယ်။ သူတို့ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာ ရောဂါပိုးနဲ့ထပ်ပြီး ထိတွေ့ပေး လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမျောက်တွေမှာ နေမကောင်းထပ်မဖြစ်တော့တာကိုတွေ့ရတယ်။သဘောက ရောဂါဖြစ်ဘူးလို့ သဘာဝကိုယ်ခံအား ရ သွားရင် နေမကောင်းပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မှန်းဆနိုင်တယ်။ ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ ကိုယ်ခံအားလုံလုံလောက်လောက် ရထား ရင်လည်း နေမကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မှန်းဆနိုင်တယ်။ မှန်းဆနိုင်တယ်လို့ ကျနော်ရေးရတာက မျောက်မှာစမ်းသပ်အောင်မြင်ထားတာပဲ ဖြစ်ပြီး လူမှာစမ်းသပ်နေတုန်းမို့လို့ပဲ။
အခုစမ်းသပ်မှုကို Harvard တက္ကသိုလ်ရဲ့ Beth Israel Deaconness Medical Center က ရောဂါပိုးမွှားနှင့် ကူးစက်ရောဂါဌာနက Dr. Dan Barouch တို့အဖွဲ့က စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ Dr. Dan Barouch တို့က အင်မတန်ကောင်းတဲ့သတင်းလို့ ဆိုထားတယ်။ အရင်က ဒါမျိုးမစမ်းသပ်ရသေးဘူး။ “ဟာ…. ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာ…. များများစမ်းသပ်ပါလားဗျ။ ကျနော်သာဆို တလက်စတည်း စမ်းမယ်။ အ ခုဟာက 1 ပတ်ကို report 1 ခုလောက်ထွက်နေတယ်။လျှာရှည်တဲ့ကောင်တွေကို ငါတို့ဆီလွှတ်လိုက်။ လက်တွေ့သိသွားမယ်။ ဒါပဲ။” “ဟုတ်ပါပြီ။ ဒုတိယစမ်းသပ်ချက်ပဲ ဆက်ရေးတော့မယ်။
ထပ်သိချင်ရင် Dr. Dan Barouch တို့ဆီသွား။ နံပါတ်(၂) Dr. Dan Barouch တို့ အဖွဲ့ကပဲ မျောက် 25 ကောင်ကို ကာကွယ်ဆေ6းမျိုးနဲ့စမ်းတယ်။ Six prototype vaccines ကို ကာကွယ်ဆေး မျိုးကွဲ6မျိုးလို့ ယူဆတယ်။ တစ်မျိုးထဲ6လုံးတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ကာ ကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ကောင် 25 ကောင်နဲ့ မထိုးထားတဲ့ကောင် 10 ကောင်ကို SARS-CoV-2 လို့ခေါ်တဲ့ Covid-19 ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးနဲ့ ထိတွေ့ ပေးလိုက်တယ်။ ဘယ်လိုခွဲသိလဲဆိုတော့ နာမည်ကပ်ပေးထားပေါ့။ xue meemee ဘာညာ။ ကိုယ်သာဆို မျောက်တွေကို friend lists ထဲကလူတွေ နာမည်ပေးထားမှာ။
အဲ့ဒီမှာ ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ 10 ကောင်စလုံးရဲ့ အဆုတ်နဲ့ နှာခေါင်းထဲမှာ ရောဂါပိုးအတော်ကြီးကို ကူးစက်နေတာတွေ့ရသတဲ့။ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ မျောက်တွေမှာ လုံလောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုရတာကိုတွေ့ရတယ်။ မျောက် 8 ကောင်မှာ အပြည့်အဝကာကွယ်မှု ပေးတာတွေ့ရတယ်။ အဲ့မျောက် 8 ကောင်က ကျန် 17 ကောင်နဲ့ ဘာကွာသလဲမပြောထားဘူး။ “We sawasubstantial degree of protection for vaccinated animals. Eight of the vaccinated animals were completely protected. ” တဲ့။ ပြီးတော့ သူတို့ စမ်း သပ်တဲ့6မျိုးက တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးဘာကွာလဲလည်း မပြောဘူး။ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက -ခေါင်းကျယ်တယ်အဲ့လိုပဲ။
ပြောချင်မှပြောတာ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရောဂါကာကွယ်ဆေးသာရရင် ရောဂါကူးစက်ခံရဖို့ အခွင့်အရေးနည်းတယ်။ ♦️သို့တည်းမဟုတ် ကြား ထဲမှာ ကူးစက်ခံရပြီး ပြန်ကောင်းလာရင် ထပ်ဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါးတာတော့သေချာတယ်။ လူမှာစမ်းသပ်ပြီးမှ အသေ အချာ ပြော လို့ရမယ်။ဒါနဲ့ကြုံတုန်းပြောလိုက်အုံးမယ်။ Oxford တက္ကသိုလ်က ကာကွယ်ဆေး “ChAdOx1” ကိုသိတယ်မလား။ ကျနော် ကတော့ Oxford ကဆေးကို သမားရိုးကျဆိုပေမယ့် အထင်ကြီးတယ်။ ဟိုတလောက သူများတွေက Fail ဖြစ်တယ်လို့ ထအော်တဲ့ဆေးလေ။
အဲ့ဆေးကို AstraZeneca က dose ပေါင်း 1 ဘီလီယံထုတ်ဖို့ပြင်နေကြောင်း မနေ့က ကျနော်ကာကွယ်ဆေး post ထဲမှာရေးခဲ့ပါတယ်။ ညကသတင်းထဲမှာ အမေရိကန်အစိုးရက အဲ့ဒီ 1 ဘီလီယံထဲက သန်း 300 ကိုဝယ်ယူဖို့ ပြောထားလိုက်ပါပြီတဲ့။ အမေရိကန်ရဲ့ လက်မြန်ချက်။
Richard Myo Thant 22-May-2020
Covid-19 ကာ ကှယျဆေးနဲ့ ပတျသကျပွီး နောကျ ဆုံးတှရှေိ့ခကျြ မြား
ကိုဗဈ-၁၉ကာကှယျဆေး ရှာရတာ ကိုရီးယားကား အခနျးဆကျကွညျ့နရေသလိုပဲ။ ဟိုဟာတှလေို့ကျ ဒီဟာတှလေို့ကျနဲ့။ လိုရငျးကို မ ရောကျနိုငျဘူး။” “မလှယျဘူးဖိုးခငျ” “မြောကျကလိုသလောကျမရဘူးကှ။ ဒီမှာ ရဈခတျြ… မငျးလာအစမျးခံမလား။” “စမျးသပျတာက လှယျ တယျမှတျလို့ ပိုးတှအေပွငျမပွနျ့သှားအောငျ ထိနျးသိမျးရတာ နရောအခကျအခဲနဲ့ အခွားကနျ့သတျခကျြတှေ ဘာညာရှိသေးတယျ။” “ဒါလဲ ဟုတျတာပဲနျော။” “ကိုယျ့ဟာကိုယျသူမြားတှရှေိ့ခကျြတှကေို အေးဆေးထိုငျရေးနစေမျးပါကှာ။ လြှာမရှညျနဲ့။ ဒီမှာက အသကျနဲ့ရငျးလုပျ နရေတာ။ တိရိစ်ဆာနျခဈြသူမြားအဖှဲ့က အျောမှာလညျး စိုးရိမျရသေးတယျ။
နောကျနောငျလြှာရှညျတဲ့ကောငျတှရေယျ။ သတငျးရေးတာကို ဟိုဟာဖွဈတယျ ဒီဟာဖွဈတယျ ဝဖေနျတဲ့ကောငျတှရေယျ လကျတှလေ့ာ အစမျးခံ။Covid-19 #ရော ဂါကာကှယျဆေးဟာအလုပျဖွဈနိုငျပွီး ရောဂါကူးစကျဖူးသူဟာရောဂါပွနျဖွဈနိုငျဖှယျမရှိဘူး လို့ မြောကျတှနေဲ့ စမျးသပျရာမှာတှရှေိ့ခဲ့တယျ။ 🇺🇸 အမရေိကနျကသိပ်ပံပညာရှငျတှကေ Covid-19 နဲ့ပတျသကျပွီး မြောကျတှကေိုစမျးသပျတှရှေိ့ထားတဲ့ သ တငျး နှဈပုဒျရှိတယျ။ နံပါတျ(၁) မြောကျ9ကောငျကို Covid-19 ဖွဈစတေဲ့ ဗိုငျးရပျဈပိုးနဲ့ ရောဂါကူးစကျအောငျလုပျလိုကျတယျ။
သူတို့ကို ရောဂါဖွဈနရောကနေ ပွနျနကေောငျးလာအောငျစောငျ့တယျ။ သူတို့ပွနျကောငျးလာတဲ့အခါမှာ ရောဂါပိုးနဲ့ထပျပွီး ထိတှပေ့ေး လိုကျတယျ။အဲ့ဒီမြောကျတှမှော နမေကောငျးထပျမဖွဈတော့တာကိုတှရေ့တယျ။သဘောက ရောဂါဖွဈဘူးလို့ သဘာဝကိုယျခံအား ရ သှားရငျ နမေကောငျးပွနျမဖွဈနိုငျဘူးလို့ မှနျးဆနိုငျတယျ။ ရောဂါကာကှယျဆေးထိုးထားလို့ ကိုယျခံအားလုံလုံလောကျလောကျ ရထား ရငျလညျး နမေကောငျးမဖွဈနိုငျဘူးလို့ မှနျးဆနိုငျတယျ။ မှနျးဆနိုငျတယျလို့ ကနြျောရေးရတာက မြောကျမှာစမျးသပျအောငျမွငျထားတာပဲ ဖွဈပွီး လူမှာစမျးသပျနတေုနျးမို့လို့ပဲ။
အခုစမျးသပျမှုကို Harvard တက်ကသိုလျရဲ့ Beth Israel Deaconness Medical Center က ရောဂါပိုးမှားနှငျ့ ကူးစကျရောဂါဌာနက Dr. Dan Barouch တို့အဖှဲ့က စမျးသပျခဲ့တာဖွဈတယျ။ Dr. Dan Barouch တို့က အငျမတနျကောငျးတဲ့သတငျးလို့ ဆိုထားတယျ။ အရငျက ဒါမြိုးမစမျးသပျရသေးဘူး။ “ဟာ…. ခငျဗြားတို့ကလညျးဗြာ…. မြားမြားစမျးသပျပါလားဗြ။ ကနြျောသာဆို တလကျစတညျး စမျးမယျ။ အ ခုဟာက 1 ပတျကို report 1 ခုလောကျထှကျနတေယျ။လြှာရှညျတဲ့ကောငျတှကေို ငါတို့ဆီလှတျလိုကျ။ လကျတှသေိ့သှားမယျ။ ဒါပဲ။” “ဟုတျပါပွီ။ ဒုတိယစမျးသပျခကျြပဲ ဆကျရေးတော့မယျ။
ထပျသိခငျြရငျ Dr. Dan Barouch တို့ဆီသှား။ နံပါတျ(၂) Dr. Dan Barouch တို့ အဖှဲ့ကပဲ မြောကျ 25 ကောငျကို ကာကှယျဆေ6းမြိုးနဲ့စမျးတယျ။ Six prototype vaccines ကို ကာကှယျဆေး မြိုးကှဲ6မြိုးလို့ ယူဆတယျ။ တဈမြိုးထဲ6လုံးတော့ မဖွဈနိုငျဘူး။ ကာ ကှယျဆေးထိုးထားတဲ့ကောငျ 25 ကောငျနဲ့ မထိုးထားတဲ့ကောငျ 10 ကောငျကို SARS-CoV-2 လို့ချေါတဲ့ Covid-19 ဗိုငျးရပျဈပိုးနဲ့ ထိတှေ့ ပေးလိုကျတယျ။ ဘယျလိုခှဲသိလဲဆိုတော့ နာမညျကပျပေးထားပေါ့။ xue meemee ဘာညာ။ ကိုယျသာဆို မြောကျတှကေို friend lists ထဲကလူတှေ နာမညျပေးထားမှာ။
အဲ့ဒီမှာ ကာကှယျဆေးမထိုးထားတဲ့ 10 ကောငျစလုံးရဲ့ အဆုတျနဲ့ နှာခေါငျးထဲမှာ ရောဂါပိုးအတျောကွီးကို ကူးစကျနတောတှရေ့သတဲ့။ ကာကှယျဆေးထိုးထားတဲ့ မြောကျတှမှော လုံလောကျတဲ့ ကာကှယျမှုရတာကိုတှရေ့တယျ။ မြောကျ 8 ကောငျမှာ အပွညျ့အဝကာကှယျမှု ပေးတာတှရေ့တယျ။ အဲ့မြောကျ 8 ကောငျက ကနျြ 17 ကောငျနဲ့ ဘာကှာသလဲမပွောထားဘူး။ “We sawasubstantial degree of protection for vaccinated animals. Eight of the vaccinated animals were completely protected. ” တဲ့။ ပွီးတော့ သူတို့ စမျး သပျတဲ့6မြိုးက တဈမြိုးနဲ့ တဈမြိုးဘာကှာလဲလညျး မပွောဘူး။ သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ -ခေါငျးကယျြတယျအဲ့လိုပဲ။
ပွောခငျြမှပွောတာ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရောဂါကာကှယျဆေးသာရရငျ ရောဂါကူးစကျခံရဖို့ အခှငျ့အရေးနညျးတယျ။ ♦️သို့တညျးမဟုတျ ကွား ထဲမှာ ကူးစကျခံရပွီး ပွနျကောငျးလာရငျ ထပျဖွဈဖို့ အခှငျ့အလမျးနညျးပါးတာတော့သခြောတယျ။ လူမှာစမျးသပျပွီးမှ အသေ အခြာ ပွော လို့ရမယျ။ဒါနဲ့ကွုံတုနျးပွောလိုကျအုံးမယျ။ Oxford တက်ကသိုလျက ကာကှယျဆေး “ChAdOx1” ကိုသိတယျမလား။ ကနြျော ကတော့ Oxford ကဆေးကို သမားရိုးကဆြိုပမေယျ့ အထငျကွီးတယျ။ ဟိုတလောက သူမြားတှကေ Fail ဖွဈတယျလို့ ထအျောတဲ့ဆေးလေ။
အဲ့ဆေးကို AstraZeneca က dose ပေါငျး 1 ဘီလီယံထုတျဖို့ပွငျနကွေောငျး မနကေ့ ကနြျောကာကှယျဆေး post ထဲမှာရေးခဲ့ပါတယျ။ ညကသတငျးထဲမှာ အမရေိကနျအစိုးရက အဲ့ဒီ 1 ဘီလီယံထဲက သနျး 300 ကိုဝယျယူဖို့ ပွောထားလိုကျပါပွီတဲ့။ အမရေိကနျရဲ့ လကျမွနျခကျြ။
COVID-19ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရခြင်း ရှိ/မရှိ မိနစ်ပိုင်းအတွင် စစ်ဆေးနိုင်မည့် နည်းပညာသစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိ
တစ် ရက်တည်း စံချိန်တင် (၁၄၂၆) ဦးကူးစ က်ပြီး Covid-19 တတိယလှိုင်း ဒဏ်ခံနေရတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှက စင် ကာပူ အခြေအနေ
အီတလီမှာ ဘီကီနီနှင့်ဆင်တူ နှာခေါင်းစည်းများ လူအများစိတ်ဝင်စား၍ ရောင်းအားကောင်း
COVID-19ကာကွယ်ဆေး မရမခြင်း စာသင်ကျောင်းများ ပိတ်ထားရန် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတ အမိန့်ထုတ်